XOG: Xasan Shiikh iyo Xaasaskiisa oo 4 sano kadib ka taajiray Hantida ummadda – Kismaayo24 News Agency
XOG: Xasan Shiikh iyo Xaasaskiisa oo 4 sano kadib ka taajiray Hantida ummadda
by admin 14th November 2016 14th November 2016 4 138
Madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday ee dowlada Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa waxaa uu markii uu kursiga madaxweyne qabanayey macalin ay soo gasho mushaharka uu ka helo jaacamada SIMAD, islaamihiisana waxay ahaayeen kuwa shidaal gada iyo kuwa guri joogto ah.
Markiise xilka loo dhiibay waxaa mar kaliya is badelay muuqaalkoodii dhaqaale, waxaana ay xaasaskiisa boob toos ah ku bilaabeen hantida dadweynaha. Waxaana la arkay iyagoo iibsi ugu dhaqaaqay boosaska ugu qaalisan magaalada Muqdisho ee caasimada u ah dalka Soomaaliya.
Kuma joogsan inay dhulkaasi iibsadaan, ee waxaa haddana ay goobahaasi ka dhisteen dabaqyo dhaadheer, oo hanti badan la geliyey. Taasi oo calaamad su’aal gelineysa musuqmaasuqa muuqda ee xarga-gooyey oo ay sameeyeen xaasaska Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud.
Odey Maxamed Ali, oo ka mid ah cuqaasha magaalada Muqdisho aan dhinacna uga bixin, haddana deris la ahaa Sahro oo ah xaaska Madaxweynaha ayaa waxaa uu wax lala yaabo ku tilmaamay u bareerida hantida dadweynaha ee 4 sano gudaheed laga taajiray, isagoona tusaale usoo qaatay xaala dhaqaale ee Sahro iyo sida ay maanta tahay.
“Xaa loo lahaa hantida dadweynaha dadkii dhaca waa lala xisaabtamayaa, xaa loo arki waayey xaasaska Xasan Shiikh ee dabaqyada ka dhistay wadada Maka-Almukarama?, mise kuwaasi sharcida dowlada ma qabanayo, ee waaba caawinayaa inay sii dhacaan dadka” ayuu yiri odey Maxamed Ali, oo intaasi raaciyey.
“Qof isaga aan shalay heysan 100 dollar oo qof siiyo, miyaa maanta la iga dhaadhicin karaa 10, 000 dollar ayey maalintii la arko dadsiineysaa?Xaggee lacagtaasi ka timid?” ayuu yiri odey Maxamed Ali.
Marwo Qamar ayaa lafteeda ka mid ah xaasaska Xasan Shiikh ee ku maaleystay magaca ninkeeda madaxweynaha ka ah dalka, waxaana caado ka dhigatay in loo qabto xaflado ay ku baxdo lacago badan, halka ay qoysas badan oo Soomaaliyeed la daalaacayaan abaaro xun oo dalka halageeyey.
“Qamar xafladee dhiganeysaa, oo hantidii dalkey tamashleyn ugu dhaqaaqday, dadkiina abaar ayaa leysay.” ayey hooyo Isniino Calasow oo ku jirta guryaha barakacayaasha ee ku yaala taalada Sayidka deggan.
Shirkadaha diyaaradaha waxaa ay saarteen saami ay wax ku leeyihiin xaasaskan, waxaa Sidoo kale ay bilaabeen inay mid ka mid ah xaasaska ay mashruuc ahaan u qaadato warqadaha viise-ahaan dadka loogu saaro baasaboorka marka ay dalka soo galayaan, taasi oo dhan qofkasta in la saarto 10 dollar.
“Qofka wata baasaboorka ajanabiga ah waxaa laga qaadi jiray 50 dollar, haddase xaaska madaxweynaha ayaa loogu daray 10 dollar, taasi oo ka dhigeysa in qofkasta uu bixiyo 60 dollar. Dalka noocaasi ah miyaa rajo laga sugayaa, mise ninka sidaasi yeelay ayaa mar kale la dooran karaa” ayuu yiri Farah Jama oo ah aqoonyahan madax ah hay’adda la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya.
Waxaana uu intaasi ku daray in Xasan Shiikh Maxamuud waxa kaliya ee lagu xasuusan doono ay tahay in isaga iyo Xaasaskiisa ku taajireen 4 sano oo uu xukunka joogay, waliba ay soo galeen liiska rugta ganacsiga, mid ka mid ah xaasaskiisana lagu wado in dhawaan guddoomiye looga dhigo.
Ugu danbeyntii dowlada uu hoggaamiyo Xasan Shiikh Maxamuud ayaa noqoneysa dowladii ugu musuqmaasuqa badneyd ee abid soo marta dalka Soomaaliya, waxaana laga dareemay hanti boobkiisa guri kasta oo Soomaaliyeed ilaa hay’addaha taageera Soomaaliya oo dib ula noqday wixii ay ku taageeri jireen dalkan, maadaama ay arkeen boobka toos ah ee dalkan ka socda.
TOP NEWS: Maxaadan Ogeyn oo Saacidihii lasoo dhaafay ka dhacay Dagmada Buur-hakaba ee Gobolka Baay??? War ayaan idin kaga heynaa
Daawo Sawirro: Wariye Reer Galbeed ah oo La kulmay Saxafiyiin Muqdisho ka tahriibay oo ku Xayiran Xuduuda u dhaxeysa Wadamada Turkiga iyo gariiga+Magacyadooda
Tifaftiraha K24 8th December 2016 8th December 2016
Top News: Ciidamaddii uu hogaaminayey Col Barre ee qeybta Kamid ah wadahaladii Dowlada ay Gar wadeynka ka aheyd Kismaayo Ku Galay oo ka cabanaya dhibaatoyin ay kenyanka ku hayaan.
XASAASI; MD Xasan sheekh oo si kulul ugu Jawaabay Musharaxiin uu sheegay in ay aflagaadeyen…
Tifaftiraha K24 13th September 2016